श्रावण ४, २०७६ ०३:५४:५८
मुटु जोगाउन यी १० खराब बानी त्याग्नुस् असार २९, २०७६
महिलाको छिटो विर्य झार्ने बिधि । (थाहा पाईराखौ) असार २९, २०७६
यौन चाहाना पुरुषलाई बिहान र महिलालाई राति असार २९, २०७६
हरियो खुर्सानीले पुर्याउछ स्वास्थ्यलाई फाइदै–फाइदा पिरो खान मन पराउने धेरै हुन्छन् । हरियो खुर्सानी खाने हो भने पिरो स्वादसँगै अन्य लाभसमेत उठाउन सकिन्छ । हरियो खुर्सानीले पेट र छातीमा असर गर्दैन । यसमा भिटामिन ए, बी–६, सी, आइरन, पोटासियम, कार्बोहाइड्रेट र अन्य धेरै पोषक पदार्थ पाइन्छन् । असार २९, २०७६
३० वर्षपछि शरीरमा विभिन्न बदलाव आउँछन्, यी खानेकुरा नखाँदा राम्राे स्वस्थ्य रहनका लागि खानपानमा विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै मानिस पहिलो आफ्नो डाइटमा ध्यान दिदैनन र, जव शरीरमा समस्या आउन लाग्छ तव सतर्क वन्छन् । असार २७, २०७६
शरीरका यी अंगहरु ठूला हुने महिला हुन्छन् भाग्यमानी हिन्दू शास्त्रअनुसार युवतीहरु खुशी र सुखी भएको घरमा सधै लक्ष्मीको बास हुने मान्यता राखिन्छ । असार २७, २०७६
सेक्स चाहाना भएकी महिलाले देखाउन्छन् यी ब्यवहार संसारभरी नै एउटा मान्यता छ महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । केटीहरु कम बोलेर धेरै कुरा भन्छन् । पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । असार २७, २०७६
गर्भवती महिलाकाे भाेजनमा आवश्यक यी खानेकुराहरू गर्भवती महिलाले खाने सन्तुलित आहारले स्वयं महिला र गर्भमा रहेको बच्चालाई फाइदा पुर्याउँछ। गर्भवती महिलाको पेटमा भएको बच्चाले आमाले खाएको खाना अनुसार पौष्टिकता प्राप्त गर्ने हुँदा गर्भवती महिलाले आहार बिहारमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । असार २७, २०७६
यौन सम्पर्क गर्दा–गर्दै पलङ नै भाँचिएपछि दक्षिणपूर्वी इंगल्याण्डको बर्कशायर सहरमा एक जोडी दम्पत्तिले सम्भोगका क्रममा सावधानी नअपनाउँदा ठूलै सकस बेहोर्नुपरेको छ । सेक्स गर्दा पलङ नै भाँचिएपछि उत्तानो परेकी महिला भुइँमा बजारिँदा गम्भीर घाइते भएकी छिन् । उनको मेरुदण्डमा चोट लाग्दा उनको शरीर प्यारालाइज्ड भएको छ । असार २५, २०७६
यसकारण महिला संभोगका लागी तयार हुँदैनन्, यौन रुचि जगाउन के गर्ने ? दाम्पत्य जीवन सुखी बनाउन यौनको मुख्य भूमिका हुन्छ । तर, महिलामा हुने यौनप्रतिको अरुचिले दाम्पत्य जीवनलाई नै जोखिममा पारेको उदाहरण प्रशस्त छन् । यौन अंगमा रक्तसञ्चार कम भए यौन अरुचि हुनसक्छ । असार २५, २०७६
तनाव र कुलत हटाउने उपाय तपाईं आफ्नो कार्यालयमा तनावमा हुनुभयो भने राति धेर खाने वा जंक फूड खाने गर्न थाल्नुहुन्छ । यसले तपाईंको स्वास्थ्यलाई नराम्रो असर पार्छ । असार २५, २०७६
श्रीमानको के कुरामा रिसाउँछन् श्रीमती ? जुन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्ता कुराहरुलाई मतलब नै नगर्ने बानी सम्भवतः श्रीमतीहरुलाई आफ्नो श्रीमानको सबैभन्दा नराम्रो बानी लाग्नसक्छ । यस्ता साना–साना कुराले विवाहित जोडिमा झगडा पैदा हुनसक्छ । असार २५, २०७६
यौन सम्पर्क जस्तो सुकै अवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ तर पनि एउटा कुरा अलिकति जानकारी लिनुहोस ! आफ्नो जिउलाई तन्दुस्त बनाउन तथा मोटोपन र अन्य स्वास्थ्य समस्याबाट बच्नको लागि मर्निङ वाक गर्ने आम प्रचलन छ । कतिपयले मर्निङवाक सँगै विहानीपख कसरत पनि गर्दछन् । असार २४, २०७६
यी चीज खानुहोस् मासुमा भन्दा तीन गुण बढी फाइदा अमेरिकाको लोमा लिन्डा युनिभर्सिटी तथा फ्रान्सको नेसनल दा लारिसर्च अग्रोनोमिकका शोधकर्ताहरूले ८१ हजार जनामाथि एक अनुसन्धान गरे । असार २४, २०७६
पुरुषहरुले महिलाको कुन अंगमा बढी हेर्छन् ? महिलाहरुलाई घुरेर हेर्ने बानी पुरुषका लागि कुनै नौलो होइन । असार २२, २०७६
मानिसले निन्द्रामै किन सेक्स गर्छ ? जानी राखौ सेक्सका बारेमा अनौठा कुराहरु दिन प्रति दिन सार्वजनिक भइरहेको हुन्छन् । असार २२, २०७६